SAINT BERNARD DOG SAWIRADA TARANKA, BOGGA 3 - EEYAHA
Saint Bernard Dog Sawirada Taranka, Bogga 3
Beatrice the Saint Bernard oo 8 bilood jir ah— Waxaan markii hore helnay Saint Bernard anagoo u maleyneyna inay guud ahaan noqon laheyd baradho sariirta laakiin waan qaldanay. Yar oo loogu talagalay noocyadeeda 107 lbs. waxay la socotaa iyada Shaybaarada iyo Adhijirka Australia ee park eey . Iyadu si kale ayey run ugu tahay astaamaheeda, ilaalinaysa laakiin saaxiibtinimo, waxay jeceshahay inay cagahayga dhigto oo ay daadato iyo xaddi xad dhaaf ah laakiin ma qiyaasi karin noloshayda la'aanteed. '
Beatrice the Saint Bernard markay jirtay 8 bilood
Beatrice the Saint Bernard oo 8 bilood jir ah oo ku ciyaaraya biyaha
Beatrice the Saint Bernard oo 8 bilood jir ah oo la seexaneysa milkiilaheeda
Beatrice the Saint Bernard oo 8 bilood jir ah oo seexanaysa fadhiga sariirta
Basbaas Saint Bernard oo 3 jir ah— 'Boggan waxaa laga yaabaa inuu badbaadiyay nolosha eeyga cusub. Waxaan ka helay xayeysiis ku saabsan Craigslist bilaash ah St Bernard oo aan ku jawaabay, kuna dhammaaday booqashada eyga. Haddaanan akhrinayn websaydhkaaga, hab-dhaqankeeda (oo ay soo sheegeen milkiilayaashu oo ay u fiirsadeen markii aan booqday) waxay noqon lahayd isbeddel weyn. Aniguna waxaan qiyaasayaa kadib 1-2 gacan-qabsi milkiilaha inay u badan tahay inay ku dhamaan lahayd hoyga eyga ama tigidh hal dhinac ah oo xafiiska dhakhtarka xoolaha ah. Isla markii aan ka degay gaariga xamuulka ah ayay kor u kacday iyadoo ciiraya oo sameyneysa calaamado aad u muuqda oo muujinaya in dadkani ay yihiin 'iyadu'. Waxaan galnay guriga (iyada oo hogaamineysa wadada) waxayna u badan tahay inay qaadatay nus saac markii aan lahadalnay milkiilayaasha, kuwaas oo qirtay inay eey tahay mid dagaal badan ilaa ay ka helayaan biilal ay ku bixinayaan deriskooda oo ay mar qaniintay mid ka mid ah iyaga ka hor inta aysan xitaa ii soo dhowaanin. Laakiin, markaan akhriyay degelkan marka hore, waxaan qaatay boodbood xagga iimaanka ah oo si kastaba ha ahaatee waan u qaatay, anigoo u sheegaya inaan iyada siin doono tijaabo hal toddobaad ah. Waxaan istaagay jardiinada u dhow si aan ugu qaado iyada soo jeedin 'socod dheer' . Isdhexgalkayagii ugu horreeyay ee halista ah wuxuu ahaa iyada oo si madax adayg ah u diidaysa inay ka tagto gaariga. Taasi waqti dheer ma dheereyn, maadaama aan caadeystay in aan 150+ riyaal rodol ku dhaansado. Ahaanshaha alfa waa jago aan aad ugu bartay buuxinta riyaha , Waxay ahayd inaan barto sida loo sameeyo ku hadal canine nstead of caprine. Gaarigii wey ka tagtay. Waxay qaadatay xoogaa adkeynaya, laakiin way ka tagtay gaariga xamuulka ah. Waxaan u badan tahay inaan soconnay nus saac ka hor intaanay ugu dambeyntii bilaabin inay u hoggaansamaan xarigga. Nasiib wanaagse ma aysan jirin dad badan ama eeyo ku socda raadadka si ay u adkeeyaan wadahadalkeenna, maadaama ay roob da'ayeen si aad u adag. Imaanshaha guriga waxay isku dayday inay ku korto qoyskeyga (taas oo aan si dhaqso leh u joojiyay) anigana waan u qaatay loo qoray 'socodka' . Tan iyo waagaas waxbadan ayey ka sii fiicnaaneysay. Sida iska cad iyada wali waxay leedahay dabeecado aan la baran oo wali waxaan ku guda jiraa barashada 'canine,' laakiin waxaan u maleynayaa inay amaan tahay in la yiraahdo iyadu hada waa xayawaan badbaado leh, oo faraxsan. Hadda waa inaan ariga u tababaro in 'yeydu' ay nabdoon tahay. Kaas oo muhiim ah sidaan rabo eeyaha ilaaliya xoolaha mustaqbalka. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuugu mahadceliyo anigoo ku hadlaya magaca Pepper-ka una sheegaya akhristayaashaada inay haa tahay, waad awoodaa isticmaal habkan , xitaa haddii aadan haysan xirfadle ku tusa sida. Way shaqaysaa. Sidoo kale waan ku tababaray ka hor intaanan Basbaas ku helin nin aad u xoog badan oo 10 jir ah Pitbull aadna waan u xayawaan yaryahay. Waxaan fuulnay oo Pitbull wuxuu xirnaa suunka. Intii aan ku guda jirnay wada hadalka barafka dhalaalaya kor iyo hoos oo ah buuro aad u qoto dheer Pitbull ayaa si fiican u fikiray bartamaha socodka. Eygiisa kale ee milkiilihiisa (oo ay maamusho milkiilaheeda) ayaa weeraray eyga qof dhamaadka safarka. Kii aan wax ka qabtay ayaan iska indha tiray dhammaan eeyaha kale wax yar oo sixitaan ah ka dib oo ay aad u badnaayeen. :) '
'Kani waa Saint Bernardkeyga quruxda badan eey 9 toddobaad jirsato. Waxaan helay nin breeder ah oo iibiya ardayda St. Bernie bishii Diseembar oo kaliya $ 300, waligayna waxaan ku riyoon jiray inaan yeesho mid, markaa waxaan sameeyay safar 3 saacadood ah waxaanan ku dhacay jacayl-araggii koowaad markii aan arkay eeygayga. Saaxiibkay ila wadaagaan wuxuu haystaa Ingiriis Mastiff ah oo la yiraahdo Lil, marka si dabiici ah Ii wuxuu iigu magacaabay St. Bernard Biggie, marka waxaan leenahay Big iyo Lil. '
Biggie, ilmahayga St. Bernard ee jira 5 bilood
'Biggie waa cunugga ugu macaan badan ee aan abid arko. Isagu waa mid aad u jilicsan oo caajis badan. Wuxuu jecel yahay inuu maalmihiisa ku seexdo sagxadda dhirta adag oo uu seexdo. Laakiin ha u oggolaan inuu cayilkiisa naftiisa doqonimo ka qaado, markuu maqlo xariggiisa dhammaan wuu faraxsanaadaa wuuna ogyahay inay tahay waqtigii socodkiisa. Waxaan isku dayeynaa inaan socod dheer galino maalin kasta si aan qaabkeena u ilaalino. Aad buu ugu xeel dheer yahay xadhigiisa, midigtayda ku socda , ma ahan hortayda. Hadalkiisu waa mid jilicsan oo daryeel leh, in kasta oo had iyo jeer ay u muuqato sidii inuu wax ka hadlayo. Wuxuu umuuqdaa inuu leeyahay dareen lixaad oo ku saabsan shucuurta aadanaha. Markuu arko qof murugaysan, wuxuu ku garaacaa midig wuxuuna madaxiisa aad u weyn saarayaa midig dhabta dhabta. Ama hadaan xanaaqo, wuxuu u eg yahay inuu jiifo oo iskudayo inuu salaaxo hadhow. Waxaan u adeegsadaa hadalka hobble, maxaa yeelay waa sida uu hadda u socdo. '
'Isagu wali si buuxda ugama uusan korin cagihiisa noloshu ka weyntahay, sidaa darteed isagu waa mid cakiran. Sida ugu badan ee Saint Bernards runta ah, wuxuu jecel yahay inuu ka farxiyo. Mar dhif ah weligiis wuu ciyoodaa ama isku dhacaa, laakiin mar buu is difaaci jiray markii arday kale uu isku dayay inuu ku jiito. Guri keli ah oo aan ogaaday inaan yeelanayo St. Bernard waa sumadda! Biggie duurjoogta markuu aad u kululaado, ama biyo cabbo kadib. Ma ahan sifo rafcaan leh, laakiin waxaan baranay inaan dhowr cukhdo ah ku dhaweyno guriga mana xuma. Isaga iyo kaayaga Mastiff Lil aad ayuu u deggan yahay, sifiican ayeyna u wada ciyaaraan.
Barney eeyaha yar ee Saint Bernard ee 12 toddobaad jira
Barney Saint Bernard oo gaaban oo jira 7 bilood
Archie the St. Bernard oo 3 sano jir ah oo baraf wata oo foosto qoorta saaran
Archie the St. Bernard da'da 3 sano jir — u fiirso qaboojiyaha duurxul afkiisa ka soo baxaya.
Archie the St. Bernard oo 6 1/2 sano jir ah oo wata Nick binkiisa
Frex the St. Bernard puppy — Frex wuxuu u taagan yahay Freckles iyo xaqiiqda ah inuu weynaan doono sida T-Rex. Tani waa booqashadii ugu horreysay ee Frex ee dhakhtarka xoolaha. Lix toddobaad jir oo dhammaantood seexanaya.
Frex the St. Bernard puppy at 6 toddobaad jiif
'Frex wuxuu ku soo barbaaray gabadh. Waxay ku dhowdahay 165 rodol, waa nadiif saafi ah St. Bernard. Caqli badan sida ay noqon karto, xitaa waxay fureysaa albaabka suuliga waxayna daartaa tubbada si ay nafteeda ugu hesho cabitaan cabirkeedu yahay St. Bernard.
Shelby Dakota iyo Gretchen
Macluumaadka Saint Bernard
Saint Bernard Sawirada 1
Saint Bernard Sawirada 2
Saint Bernard Sawirada 3
Saint Bernard Dogs: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
shih tzu iyo bichon frize puppy puppy puppy
images of muqisho bulldog Maraykanka
gilgil iyo guntin yaryar oo isku darka
isku darka god iyo madow